TAARIIKHAHA Archives - TELES RELAY
CAAFIMAADKA CUSUB FARSHAXANKA QODOBO kale shaneemo madadaalo DHAQAALAHA
Amazon hadda waxay siineysaa 10 dalabyo gaar ah oo loogu talagalay macaamiisha Prime-ka kaliya - BGR
EUA FDA oo nadiifisay wajiyad KN95 waligood kuma hooseynin Amazon - BGR
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Maaskarada 'Powecom KN95' ayaa ahaa kuwa ugu iibinta badan wajiyada wajiga ilaa bilowgii ...
$ 95 maaskarada madow ee loo yaqaan 'KN1', iibinta Fire TV Stick, $ 10 xeedho wireless, inbadan - BGR
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Qofkasta oo raadinaya heshiisyada maalinlaha ah ee ugufiican webka ...
4K Roku oo ah $ 25, N95 wajiyadda u ah $ 1, $ 70 oo ka baxsan Apple Watch S6, Purell, inbadan - BGR
Waxaa jira wax yar oo gorgortan maalinle ah usbuucaan, oo waxaan haynaa 10 qaas ah oo aan dooneyno inaan kuu soo bandhigno. Waxyaabaha muhiimka ah ee wareega Sabtida waa waji madoow oo loo yaqaan 'AccuMed' oo dadka wax iibsanaya…
Dukaanleyda Amazon kuma filnaan karaan wajiyadan KN95 - hadda waa ...
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo waji shareerka ah maalmahan, laakiin ...
5 waaxyo qarsoodi ah oo Amazon ah oo aad ka heli karto heshiisyo la yaab leh - BGR
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Goobta Amazon waa mid aad u ballaadhan oo xitaa kuwa iibsada ee ugu daacadsan Amazon aysan sameyn…
Waa inaad aragtaa 10-kaas Shirkadood ee Gaarka ah ee Amazon ee loogu talagalay Macaamiisha Kaliya - BGR
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Tag Amazon waxaadna ka heli doontaa iibiyayaal badan oo iib ah ...
5 buug oo cuntada lagu kariyo ah oo ay ku shiraan kuwa wax iibsada ee Amazon ayaa ku waalan - BGR
Haddii aad ku iibsato badeecad ama adeeg madax-bannaan qiimeyn iyada oo loo marayo isku xirka degelkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Mashiinnada hawadu waxay kari karaan cunnooyinka aadka u jilicsan ...
Barnaamijka jimicsiga: FitWin, dhaqaaqo oo lagu abaalmariyo dadaalkaaga
FitWin waa codsi jimicsi moobiil oo aad uga duwan kuwa aan u baranay inaan ka helno internetka. Si ka duwan kuwa kale, FitWin, waxaad ku raaxeysaneysaa intaad jimicsi sameyneyso. ...
1 2 3 ... 41 soo socda